Home Maxaa Loogu Tala Galay Dhalashada
Waxaan u samaynaa sheekooyinka ciyaartooyda kubada cagta si aan taageerayaasha ula socodsiinno sheekooyinka ku saabsan ciyaartoyda ay jecel yihiin. LifeBogger Waxay soo qabataa sheekooyinka aadka u xiisaha badan, ee la yaabka leh uguna xiisaha badan ee ku saabsan xiddigaha kubbadda cagta iyadoo la tixraacayo wakhtigooda carruurnimada ilaa maanta. Taasi waa waxa aan nahay!
Qof kasta oo bini-aadam ah oo dunidan ku nool wuxuu leeyahay sheeko carruurnimo ciyaartooyda kubbadda cagtuna ma ahan meerayaal shisheeye Midkoodna ma dhalan karo awood iyo awood maskaxeed. Runtii waa bini-aadam dhab ah oo raadraaci kara farcankoodii awoowayaasha dhul ahaanta u lahaa.
Markaa, sida aadanaha oo dhami, ciyaartoy, maamuleyaasha iyo xitaa heerarka sare ee isboortiga waxay leeyihiin sheekooyin carruurnimo kuwaas oo si faahfaahsan u soo bandhigaya dhacdooyinka xiisaha leh laga soo bilaabo noloshooda koritaanka illaa qaan-gaarka ilaa iyo heerka qaangaarnimada.
Faahfaahinta Lifebogger waxaa xusid mudan dhacdooyinka caruurnimada ee ciyaartooyda kubada cagta, maamuleyaasha iyo aqoonyahanada. Ka socota LR: Van Dijk, Luka Modric, Kylian Mbappe, Zinedine Zidane iyo Aleksander Ceferin. Dhibcaha Sawirka: LB.
At Lifebogger, Waxaan qabannaa sheekooyinka noocan ah ee nolosha hore kuwaas oo qayb muhiim ah ka ah taariikh nololeedkii xiisaha lahaa ee aan u soo bandhigi lahayn ciyaartoy kubbadda cagta, maamuleyaasha iyo aqoonyahannada adduunka oo dhan.
Sababaha ka dambeeya dadaalo noocan oo kale ah waa inaan gacan ka geysano qoondadeena ku aaddan hagaajinta ciyaarta kubada cagta, iyadoo maskaxda lagu hayo in xanuunkii hore, guulaha iyo sidoo kale kartida ciyaartoyga kubada cagta, maamulayaasha iyo aqoonyahanada aysan bixin doonin kaliya casharada ugu qiimaha badan. Nolosha laakiin xiiso u yeelo kuwa hadda bilaabay safarkooda.
Taariikhda ama sheekooyinka kubbadda cagta ee runta ah waxay muhiim u yihiin dhalinyarada xiiseeya kubada cagta iyo waxyaabo kale. Dhibcaha Sawirka: GhHeadlines.
Marka la soo koobo, maqaalkani wuxuu ujeeddadiisu tahay inuu dhageystayaashayada siiyo fikrad dhameystiran oo ku saabsan waxa aan nahay iyadoo la soo bandhigayo dhacdooyinka nolosha hore ee ciyaartoy kubada cagta, maamuleyaal iyo aqoonyahano hoos yimaada cinwaano xiise leh oo si fiican loo fekeray, si cad u qoran oo qiiro leh.
Maxay sheekooyinka Carruurnimada - Ciyaartoyda Kubadda Cagta iyo Elite Kuwa Dhalashada liito
Qaar ka mid ah garsoorayaasha kubbadda cagta iyo wax-garadka ayaa u dhashay kuwa liita, qaarna waxba kama dhaxleen, qaar kalena waxay ka shaqeeyeen sidii ay naftooda uga saari lahaayeen dhibaatooyinka saboolnimada. Si kasta oo ay dhacdooyinku u socdaan, saboolnimadu runtii waxay ahayd sabab dhiirigelin leh oo keentay rag caan ah sheekooyinka hodanka ah ee kubada cagta.
Ereyga xaraashka ah ee Xaraashka ah ee Xaraashka ah ee Xaraashka ee 7 wuxuu cadeeyaa nolosha iyo koritaanka Cristiano Ronaldo, waxaa la keenay ugu wanaagsan gudaha Luis Suarez, sidoo kalena uma tudhi jirin barbaarinta; Roman Abramovich iyo Gianni Infantino laakiin sameeyey Jibriil Ciise ' kor u qaadida caannimada oo dhiirrigelisa malaayiin caruur sabool ah oo reer Brazil ah.
Silica iyo dhoola cadeynta, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Gianni Infantino iyo Gabriel Jesus ayaa la soo dersay nolosha hore. Dhibcaha Sawirka: LB.
Saboolnimadu waxay noqotay dhiirrigelin xoog leh inkasta oo ay naxdin ku tahay ciyaartoydan kubada cagta ah. Nasiib wanaagse, Ciyaarta Kubadda Cagta waxay noqotay gaadiid iyaga u ah inay horumariyaan duruufaha dhaqaale.
Maxay sheekooyinka Carruurnimada - Ciyaartoyda Kubadda Cagta Iyo Elite Kuwa Ku Dhashay Rich
Dhinaca flip, tiro ka mid ah garsoorayaasha kubbadda cagta iyo ilbaxnimada ayaa ku dhashay wax weyn, qaar waxay ku qaateen qaadooyin qalin iyo kuwa kale oo leh dhejisyo dheeman. Natiijo ahaan, waxay ku bilaabeen nolol wanaagsan waxayna ku noolaayeen meel aad uga sarreysa xadka saboolnimada.
Kuwa jecel Aleksander Caferin iyo Michel Platini goor horeba waxay ku qalabaysan yihiin taageerada ay ugu baahan yihiin inay ku noolaadaan nolol aad u weyn halka ciyaartoy badan oo kubada cagta jecel yihiin Mario Gotze, Andrea Pirlo iyo Gerard Pique ma ahayn dad shisheeye ah oo hodanka ah intaanay gaadhin caannimada.
Mario Gotze, Gerard Pique iyo Andrea Pirlo waxay ku dhasheen qoysas hodan ah. Dhibcaha Sawirka: LB.
Maxay sheekooyinka Carruurnimada - Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Ka Badbaaday Dagaal iyo Rabashado Iyagoo Carruur Ah
Sheekada carruurnimada ee ciyaartoy badan oo kale oo kubada cagta ah looma sheegi karo iyadoon taageerayaasha la soo jiidan safar wadnaha ah oo dagaalo sokeeye iyo rabshado kuwaas oo baabi'i lahaa ciyaartoyda jiritaanka.
Muuqaal ku saabsan noloshii hore ee u dhalatay dalka Nigeria Victor Moses sheegaysaa saamaynta ba'an ee rabshadaha waqooyiga Nigeria, sidoo kale sameeynin Juan Cuadrado iyo Serge Aurier ku xasuustaan ​​farxad leh rabshado ka dhacay magaalada Kolombiya ee Necocli iyo Ivory Coast siday u kala horreeyaan.
Juan Cuadrado wuxuu ka mid yahay dhowr ciyaartoy oo kubada cagta ah oo ka badbaaday dagaalladii iyo rabshado intii lagu jiray carruurnimada. Astaanta Sawirka: LB.
Maxay sheekooyinka Carruurnimada - Ciyaartoyda Kubadda Cagta oo muddo dheer dhiman lahaa sidii ilmo oo kale
Waqti dheer ka hor inta uusan wax ka ogaan ciyaarta kubbadda cagta, Diego Costa wuxuu lahaa khibrad xun oo inta badan noloshiisa ka dhigtay.
Dhacdo xun ayaa dhacday wakhtigaas Costa wuxuu jiray lix bilood jir. Waxaa u hadhay hooyadiis oo u tagtay inay maydhaan weelka. Little Costa wuxuu ku seexday joodariga qolka jiifka isagoo aan ogeyn inuu gadaal ka jiro masas sun ah. Markii hooyadiis ay ka soo laabatay jikada jikada Costa, waxay aragtay abeeso sun ah oo u soo socota cunugeeda.
Josileide da Silva Costa waxay mooday inay tahay gabal cajalad ah, laakiin sheygan oo ay u aragtay inay tahay cajalad ayaa kusii jeeday cunugeeda. Dhaqdhaqaaq deg deg ah, waxay si dhakhso leh gacanta ugu jiiday Costa si looga ilaaliyo qaniinyada abeesada sunta ah ee badbaadisa noloshiisa.
Maxay sheekooyinka Carruurnimada - Ciyaartoyda Kubadda Cagta oo Aabayaashood ay Halyeeyo u ahaayeen Isboortiga
Ma jirto wax dafiraya xaqiiqda ah in hagida ay ka caawisay hamiga ciyaartooyda kubbadda cagta in ay arkaan rajada gudaha naftooda gaar ahaan marka tababarayaasha aysan dad kale aheyn laakiin aabeyaal bayoolaji ah u ah meerayaasha.
Iyadoo aan riix dheeraad ah sida aabbaha, sida wiilka oo kale, waxaan leenahay Thiago Alcantara kaasoo daba socday aabbihiis Mazinho. Kuwa kale waxaa ka mid ah Saul Niguez kaasoo ku socday jidadkii aabihiis Antonio sidoo kale Sergio Busquets kaas oo loo qaabeeyay ka dib aabihiis Carlos. Nooc kale oo dhaxal ah ma noqon karaa mid hodan ah?
Thiago Alcantara, Saul Niguez iyo Sergio Busquets waa wiilasha halyeeyada kubada cagta. Dhibcaha Sawirka: LB.
Maxay sheekooyinka Carruurnimada - Ciyaartoyda Kubadda Cagta oo Ka Baxay Iskuulka
Qaar ka mid ah garsoorayaasha kubbadda cagta waligood uma dulqaadan in ay si iskaashi ah u fadhiistaan ​​oo ay amarrada uga qaataan macallimiinta, halka qaar kalena aan ka qalin-jabin dugsiga sare maadaama shaqooyinkooda kubbadda cagta ay sare u kaceen muddadii ay ahayd da 'yarta.
Ciyaartoyda kubada cagta waxaa ka mid ah halyeeyo sida Pele, sidoo kale kubad sameeyahan hore ee xulka Brazil iyo safiirka Barcelona - Ronaldinho. U dhaqaaqista ciyaartoy ku jira da'da kumanaanka sano - waqtiga qorista - waxaan heysanaa kuwa sidan oo kale ah Cristiano Ronaldo Xiddiga Barcelona - Lionel Messi oo aan dhammaysan waxbarashadii caadiga ahayd.
Ronaldinho, Messi iyo Pele waxay asal ahaan waxbarasho aan degganeyn inta lagu jiray carruurnimada. Dhibcaha Sawirka: LB.
Maxay sheekooyinka Carruurnimada - Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ku dhawaad ​​inay Joojiyaan Ciyaarta
Waxaa la sheegaa in marka socodku sii adkaado, ay adkaanshahu sii socdaan. Maxim wuxuu shaqeynayey sanadihii la soo dhaafay dhammaan dhinacyada dadaallada aadanaha ka hor istaagaya inaysan kubbadda cagta ciyaarin. Xaqiiqdii, waxay gacan ka geysatay hubinta in dunidu aysan ka gaabin helitaanka ciyaartoy kubada cagta ah oo muddo dheer shaqada ka fariisi lahaa.
Dad badani ma oga arrintaas Wayne Rooney jacaylka kubada cagta ayaa u dhacay sidii xidhmooyin kaararka ah markii uu ahaa ilmo yar oo ah 14-sano jir. Sidoo kale, ma jiri lahayn wax xiiso leh Ibrahimovich adduunka kubada cagta haddii aan laga hadlin inuu doorbidayo nolosha dooxooyinka. Dhiniciisa, Alisson Beckerer waaliddiintu waxay ku dhowaaqeen inay ka saaraan kubada cagta maxaa yeelay wuxuu sii waday diiwaan gelinta koritaanka bayoolajiga gaabis ah xitaa da'da 15.
Da'yarka Wayne Rooney iyo Ibrahimovich ayaa ku dhawaad ​​joojiyay ciyaarista kubada cagta. Dhibcaha Sawirka: LB.
Maxay sheekooyinka Carruurnimada - Ciyaartoyda Kubadda Cagta oo Bilaabay Sidii Ciyaartoy Dibad Bax Ah
Dynamics waa eray aan laga helin oo keliya qoraallada Fisikiska, waxay kujirtaa kubbadda cagta marka loo eego in isboortigu sidoo kale ku saabsan yahay Fiisikiska. Waxay ku dhamaanaysaa talaabada ugu horeysa ee muhiimka ah ee ciyaartooy kubada cagta ay qaadaan goor hore iyagoo kubad garaacis ku dheelaya. Ka dib, waxay ku lug leeyihiin kubbada cagta ama waxay sii wadaan inay tababar la qaataan kooxaha maxalliga ah iyo akadeemiyada naadiga.
In kasta oo ay ku dheehan tahay kubbada cagta, waxaa lagu tijaabiyaa boosas kala duwan ilaa laga dejiyo aaggooda ugu adag ama forte. Sidaa darteed, maahan wax la yaab leh in qaar ka leexdeen jagooyinka difaaca si ay ugu hormariyaan ganacsigooda xagga weeraryahanada halka qaar aad u yarna ay jecel yihiin Thibaut Courtois wuxuu dib uga dhacay inuu noqdo difaac si uu u noqdo goolhaye buuxa. Sidoo kale, David Gea Waxa uu ahaa ciyaaryahan banaanka ah ilaa uu ka dareemay gurigiisa marka loo eego cabirka goolasha.
David Gea iyo Thibaut Courtois ayaa markii ugu horeysay loo tababaray sidii ciyaartoy banaanka ah ka hor inta aysan noqonin goolhayeyaal. Dhibcaha Sawirka: LB.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay akhriskayaga Sababtoo ah sheekooyinka carruurnimada. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.